ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်စက်၏ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ထိန်းချုပ်စနစ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းပေးသွင်းသူများဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့ပေး အဖြေ အမှုန့်အပြောင်းအလဲနဲ့သည်။
Fluidized-bed Jet စက်သည်အမှန်တကယ်ခြောက်သွေ့သော superfine pulverizing ပြုလုပ်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ compressed air အားဖြင့်မောင်းနှင်သောကုန်ကြမ်းများကို centrifugal force နှင့် air စီးဆင်းမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ grinding zone သို့အထက်သို့စီးဆင်းနေသောလေအားဖြင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ခြင်းကိုခံရဖို့ nozzle လေးခုဖြတ်ကျော်ရန်အရှိန်မြှင့်သည်, centrifugal အင်အားနှင့်လေစီးဆင်းမှု၏လွှမ်းမိုးမှု, grading ဘီးအထိအမှုန့်ခွဲခြားခြင်းနှင့်စုဆောင်းပါလိမ့်မည် (ပိုကြီးသည့် အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသေးငယ်သောအမှုန်များသည် grading ဘီးထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဆိုင်ကလုန်းခွဲစက်ထဲသို့စီး ဝင်၍ စုဆောင်းသူမှစုဆောင်းရရှိလိမ့်မည်။ ) အခြားအမှုန့်များသည်ကြိတ်ခွဲစက်ထဲသို့ထပ်မံလည်ပတ်ခြင်းအတွက်ထပ်မံလည်ပတ်စေသည်။
မှတ်စုများ -2 m3 / min မှ 40 m3 / min အထိ compressed air စားသုံးမှု။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်သင်၏ပစ္စည်း၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အက္ခရာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ခန်းများ၌စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤစာရွက်တွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအဆင်တန်ဆာများ၏အချက်အလက်များသည်သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, ပြီးတော့ဂျက်ကြိတ်စက်၏တ ဦး တည်းမော်ဒယ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ပေးလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကိုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအဖွဲ့သည်ဓာတ်သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများမှပစ္စည်း ၁၀၀၀ ကျော်၏စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ ၅၀၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည့်သိသိသာသာစမ်းသပ်မှုဒေတာဘေ့စ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
PLC program ကိုဖွင့်ပါ။ Classifer ဘီး၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ပါ။
ကုန်ကြမ်းများကိုထည့်သွင်းသည့် Hopper သို့သို့မဟုတ်အစာကျွေးသောစက်ထဲသို့ထည့်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း QDF-120 စက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများကိုအစာကျွေးရန်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားမှတစ်ဆင့်လေစုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သည့်စက်များအတွက်၊
1 ။ အပူချိန်တိုးမြင့်ခြင်း - အပူချိန်တိုးလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အရာ ၀ တ္ထုတိုးချဲ့ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများမှပစ္စည်းများသည် pulverized ဖြစ်သဖြင့်ကြိတ်ဆုံတွင်းရှိအပူချိန်ကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
၂။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ - မီဒီယာများမပါ ၀ င်ဘဲလေကြောင်းစီးဆင်းမှုနှင့်မြေပြင်မှပစ္စည်းများရွေ့လျားလာခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်ညစ်ညမ်းမှုကင်းကင်းဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝကိုယ်တိုင်ကြိတ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်စက်သည်ကြာရှည်ခံပြီးထုတ်ကုန်များ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည်ခြားနားသည်။ ကြိတ်ခွဲမှုစနစ်သည်ဖုန်မှုန့်နှင့်ဆူညံသံများ၊ သန့်ရှင်းပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
၃။ ခံနိုင်ရည် - ၉ နှစ်အောက် mohs ၏မာကျောမှုရှိသောပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုသည်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နံရံနှင့်တိုက်မိခြင်းထက်အစေ့များအကြားအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်မိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောမာကျောမှု၊ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုနှင့်မြင့်မားသောတန်ဖိုးမြင့်မားသောပစ္စည်းများအတွက်။
4. အလေးချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, မြင့်မားသောတိကျ, optional ကို, မြင့်မားသောထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်မှု။
5.50 ရရှိနိုင်မှုန်အရွယ်အစား D50: 1-25μm.Goodအမှုန်ပုံသဏ္,ာန်, ကျဉ်းမြောင်းသောအမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူး။ ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောတိကျမှုမြင့်မားသောအမျိုးအစားခွဲစက် rotor သည်အမြန်နှုန်း 80m / s အထိရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များအတွက်တိကျမှုသေချာသည်။ ဘီး၏အမြန်ကို converter ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားကိုလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်ဘီးသည်ပစ္စည်းကိုအလိုအလျောက်စီးဆင်းစေပြီး၊ ကြမ်းတမ်းသောအမှုန်များမပါ ၀ င်ပါ။
အပူချိန်ထိခိုက်လွယ်သော၊ အရည်ပျော်မှတ်၊ သကြား၊ မတည်ငြိမ်သောသဘာဝပစ္စည်းများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ အပူချိန် (သို့) အပူချိန်နိမ့်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားကြိတ်ခွဲခြင်း။
7. စွမ်းအင်မြင့်မားစွာအသုံးပြုမှုနှုန်း၊ ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊
အတွင်းပိုင်းအစရှိသည့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဘီးနှင့် nozzle စသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ ဇာကွန်နီယမ်အောက်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ဆီလီကွန်ကာဘိုက်စသည့်ကြွေထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသန့်စင်မှုအတွက်ကြိတ်ခွဲမှုတစ်လျှောက်သတ္တုနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
9.PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး။
၁၀။ မော်တာကိုခါးပတ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အမြန်နှုန်းတိုး။ မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၏ပြproblemနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်လူသိများသောမော်တာအမှတ်တံဆိပ်မပါဘဲ။
QDF fluidized bed pneumatic စက်သည်ဘုံပစ္စည်းများအပြင်အောက်ပါအထူးပစ္စည်းကိုချေဖျက်နိုင်သည်။
မာကျောသောမာကြောမှုရှိသည့်ပစ္စည်း - tungsten carbide, carborundum, aluminium oxide, silicon oxide, silicon nitride
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောပစ္စည်း - စူပါပို့ချသည့်ပစ္စည်း၊ အထူးကြွေထည်ပစ္စည်းများ
အပူအထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများ - ပလတ်စတစ်၊ ဆေးဝါး၊ toner၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအောက်တွင်အဓိကအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုဗေဒနယ်ပယ်၌ရင့်ကျက်သောစျေးကွက်ရရှိထားပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးချွန်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုကိုဘယ်တော့မှမရပ်တန့်စေဘဲဖောက်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဖြေရှင်းမှုများပေးနိုင်ရန်ဖောက်သည်များကိုသင်ယူရန်သင့်တော်သည်
နောက်တစ်ခု: မြင့်မားသော Hardness ပစ္စည်းများအတွက်အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်ကိုအထူးအသုံးပြုမှု